परिक्षाको लागी पूर्व तयारी
स्वास्थ्य तथा घरेलु उपचार सम्बन्धी केही जानकारी
परिक्षा को समयमा विद्यार्थिहरु ले धेरै मेहनत गर्नु पर्दछ । निरन्तर अध्ययन गर्दा मानसिक थकावट हुनु का साथै अध्ययन मा ध्यान केन्द्रित गर्न सक्दैनन् । मानसिक थकावट भएपछी पढ्न मन लाग्दैन, मस्तिष्कले काम गर्दैन, पढेको कुरा याद रहँदैन । यस अवस्थामा ‘इथूजा(Aethusa)-30’ को सेवन ले मनको थकावट लाई हटाई दिन्छ । यस दवाई को सेवन ले मानसिक थकावट हुँदैन, मन लगाएर पढ्न सक्छन र पढेको कुरा याद रहन्छ । जसले गर्दा परिक्षामा राम्रो नतिजा ल्याउन सफल हुन्छन ।यसका साथै पढ्न मा ध्यान नदिने वा पढ्न मन नगर्ने विद्यार्थी को लागी पनी यो दवाई सहायक सिद्ध छ ।
कोही विद्यार्थीहरु परिक्षा आयो भनेपछी डर ले आत्तिन्छन, मानसिक तनाव उत्पन्न हुन्छ,परिक्षामा फेल हुन्छ भन्ने पूर्व आशंका ले चिन्तित हुन्छन् , परिक्षा आएपछी विमारी हुन्छन् , परिक्षा दिन जाने बेलामा पखाला लाग्छ । यस्तो अवस्था मा ‘अर्जेन्टम नाइट्रिकम(Argentum Nitricum)-30’ को सेवन गर्नु पर्दछ । यसले मनको डर, आशंका तथा मानसिक तनाव लाई हटाई दिन्छ । शान्त मनले परिक्षा दिन सक्छन् र परिक्षा मा राम्रो परिणाम ल्याउन सफल हुन्छन् ।
यी औषधी परिक्षा शुरु हुनु भन्दा ८-१० दिन अघी देखी परिक्षा समय भरी सेवन गर्दा उत्तम हुन्छ । यी औषधीहरु होमियोपेथी औषधी पसल मा पाईन्छ । यो १ थोपा दवाई २ चम्चा पानी मा हालेर दिनको ३ पटक खाली पेटमा खानु पर्दछ । अथवा, खाना खानु भन्दा आधा घन्टा अगाडी वा एक घन्टा पछाडी खानु पर्दछ ।
Posted by सुनिल शेखर
कुमार राधारमण April 13, 2012
राम्रो लेख। तपाई को लागी धन्यवाद।
Mukesh Chapagain's Blog
Upcoming Technology Trends for 2017
मधुमेहको पहिचान गरौं
जब फूलहरु प्रेममा पर्छन
Special Issue "Sustainability in the Mountains Region"
Best free PHP learning resources for beginners
Nepali Blog Tips
धरान, नेपाल, Nepal
नमस्कार!! म, सुनिल शेखर , धरान, नेपाल! शिक्षा-स्नातक तह! मलाई स्वास्थ्य सम्बन्धि विषयमा जिज्ञासा भएको हुँदा, स्वास्थ्य पत्रिका तथा पुस्तकहरु पढ्ने गर्दछु। त्यसैले म संग भएको जानकारीहरू लाई यस ब्लग मा लेख्ने विचार गरेको छु। आफुसँग भएको ज्ञान लाई 'सबै को हित होस' भन्ने विचारले यस ब्लग मा राखेको छु। यसबाट तपाई ले थोरै मात्र पनि लाभ पाउन सक्नु भयो भने मेरो उद्देश्य सफल हुनेछ। तपाईको अमुल्य सल्लाह, सुझाव र आलोचनाहरु को हार्दिक स्वागत गर्दछु। कृपया, आफ्नो प्रतिकृया लेख्नु होला।
यहाँ दिइएका उपायहरु प्रयोग गर्दा तपाई लाई के कस्तो फाइदा्/वेफाइदा हुन्छ; कृपया यसै ब्लगमा जानकारी दिनु होला। यसबाट अन्य पाठकहरु लाई उक्त उपाय उपयोगि छ/छैन भन्ने जानकारी हुनेछ। धन्यबाद।
इच्छा अनुसार को असल सन्तान छोरा/छोरी
आलस: एक चमत्कारि आरोग्यवर्द्धक भोजन
बबासिर/Piles को उपचार
प्राकृतिक आहार-विहार बाट क्यान्सर को उपचार-२
शौभाग्यशाली संतान प्राप्ती योग
नव मास चिकित्सा
प्राकृतिक आहार-विहार बाट क्यान्सर को उपचार-१
सोमघृत: आयुर्वेद योग
कादम्बिनि हिन्दी साहित्य
मुना: बाल पत्रिका
सरल गणित सिक्नुहोस